Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Abụọ 4:1-22
Ebe ịchụàjà, otu nnukwu efere a na-akpọ Oké Osimiri, na efere iri (1-6)
Ihe ndị e ji adọsa ọkụ, tebụl iri, na ogige abụọ (7-11a)
A rụchara ihe ndị e ji chọọ ụlọ nsọ mma (11b-22)
4 Solomọn jikwa ọla kọpa rụọ ebe ịchụàjà+ ogologo ya dị kubit iri abụọ, obosara ya dịkwa kubit iri abụọ, ma ogo ya dị kubit iri. 2 O jikwa ọla kpụọ otu nnukwu ite a na-akpọ Oké Osimiri.*+ Ọ dị okirikiri. Isi n’otu akụkụ ọnụ ya ruo n’akụkụ ọnụ ya nke ọzọ dị kubit iri. Ogo ya dị kubit ise. E jirikwa eriri e ji atụ̀ ihe tụọ gburugburu ya,+ ọ dị kubit iri atọ. 3 N’okpuru ebe ọnụ ya gbaa gburugburu, e nwere ihe ndị yiri afụfa ọhịa e ji chọọ ya mma.+ Iri dị n’otu kubit nke ọ bụla, gbaa Oké Osimiri ahụ gburugburu. Ihe ndị ahụ yiri afụfa ọhịa dị n’ahịrị abụọ. A kpụkwara ha n’ahụ́ Oké Osimiri ahụ. 4 A dọkwasịrị Oké Osimiri ahụ n’elu oké ehi iri na abụọ+ e ji ọla kọpa kpụọ. Atọ chere ihu n’ebe ugwu, atọ echee ihu n’ebe ọdịda anyanwụ, atọ echee ihu n’ebe ndịda, atọ echeekwa ihu n’ebe ọwụwa anyanwụ. Oké Osimiri ahụ dọkwa n’elu ha. Ha niile dụnyekwara úkwù n’okpuru Oké Osimiri ahụ. 5 Igbidi ya hà ka uhiè ọbụ aka mmadụ.* A rụrụ ọnụ ya ka ọ dị ka ọnụ iko, otú okooko lili na-adị. Mmiri na-eju ya na-adị puku bat* atọ (3,000). 6 Solomọn rụkwara efere iri ka e were ha na-asa ihe. Ọ dọsara ise n’aka nri, dọsa ise n’aka ekpe.+ Ihe ndị a na-asa na ha bụ ihe ndị e ji chụọ àjà a na-esu ọkụ.+ Ma, a rụrụ Oké Osimiri ahụ ka ndị nchụàjà jiri mmiri dị na ya na-asa ụkwụ na aka.+ 7 O jikwa ọlaedo rụọ ihe ndị e ji adọsa ọkụ*+ otú e kwuru ka e si rụọ ha.+ Ha dị iri. Ọ dọsakwara ha n’ụlọ nsọ, ise n’aka nri, ise n’aka ekpe.+ 8 Ọ rụkwara tebụl iri ma dọsa ha n’ụlọ nsọ ahụ, ise n’aka nri, ise n’aka ekpe.+ Ọ rụkwara otu narị (100) efere ọlaedo. 9 Ihe ndị ọzọ ọ rụrụ bụ ogige+ ndị nchụàjà,+ otu nnukwu ogige,+ na ibo ụzọ ndị dị na ha. O jikwa ọla kọpa machie ibo ụzọ ndị ahụ. 10 Ọ dọsara Oké Osimiri ahụ n’akụkụ aka nri ụlọ ahụ, n’ebe ọwụwa anyanwụ ya.+ 11 Haịram rụkwara ite, shọvel, na ọkwá dị iche iche.+ Ọ rụchakwara ọrụ ọ nọ na-arụrụ Eze Solomọn n’ụlọ ezi Chineke.+ 12 Ọ rụrụ ogidi abụọ+ na ihe ndị yiri ọkwá a kpụkwasịrị n’elu ogidi abụọ ahụ. Ọ rụkwara ihe abụọ a kpara akpa+ e ji chọọ ihe abụọ ahụ dị okirikiri a kpụkwasịrị n’elu ogidi ndị ahụ mma, 13 nakwa narị ihe yiri mkpụrụ pomigranet anọ (400)+ maka ihe abụọ ahụ a kpara akpa. Ahịrị abụọ nke ihe yiri mkpụrụ pomigranet dị na nke ọ bụla n’ihe abụọ ahụ a kpara akpa. E ji ha chọọ ihe abụọ ahụ yiri ọkwá a kpụkwasịrị n’elu ogidi abụọ+ ahụ mma. 14 Ọ rụkwara ihe iri e ji ebu ihe na efere iri dị n’elu ha,+ 15 rụọkwa Oké Osimiri na oké ehi iri na abụọ dị n’okpuru ya.+ 16 Ọ rụkwara ite, shọvel, ndụdụ,+ nakwa arịa ndị ọzọ niile. Haịram-ebaị*+ ji ọla kọpa na-egbuke egbuke rụọrọ Eze Solomọn ihe ndị a maka ụlọ Jehova. 17 Ebe a nọ kpụọrọ eze ihe ndị a bụ ná mpaghara Osimiri Jọdan, n’ala ụrọ nke dị n’agbata Sọkọt+ na Zereda. 18 Arịa a niile Solomọn rụrụ dị ọtụtụ. A maghịkwa otú ọla kọpa e ji rụọ ha hà n’arọ.+ 19 Ihe ndị Solomọn rụrụ+ maka ụlọ ezi Chineke bụ: ebe ịchụàjà e ji ọlaedo rụọ,+ tebụl+ ndị a na-edosa achịcha a na-enye Chineke,+ 20 ihe ndị e ji adọsa ọkụ* nakwa ọkụ* ndị a dọsara n’elu ha e ji ọlaedo a na-agwaghị agwa+ rụọ. E mere ha ka a na-amụnye ha ọkụ n’ihu Ebe Kacha Nsọ* otú e kwuru ka a na-eme. 21 Ọ rụkwara ihe yiri okooko osisi, ọkụ* ndị ahụ, nakwa mkpà ndị e ji ejide owu. E ji ọlaedo a na-agwaghị agwa rụọ ihe a niile. 22 Ihe ndị ọzọ ọ rụrụ bụ ihe ndị e ji emenyụ ọkụ, efere, iko, na ihe ndị e ji agụrụ ọkụ, ndị e ji ọlaedo a na-agwaghị agwa rụọ. O jikwa ọlaedo rụọ+ ọnụ ụzọ a ga-esi na-abata n’ụlọ ahụ, ibo ụzọ a ga-esi na-abanye Ebe Kacha Nsọ,+ na ibo ụzọ ndị dị n’ụlọ nsọ* ahụ.
^ Na Hibru, “Haịram-ebiv.” Ọ bụ otú ọzọ e si ede aha a.